नेपाल आज | सगरमाथाबाट समाजवादको नयाँ झण्डा फहराउने प्रचण्डको इच्छा
सगरमाथाबाट समाजवादको नयाँ झण्डा फहराउने प्रचण्डको इच्छा
आइतबार, २२ भदौ २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज(PO)
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सगरमाथाबाट समाजवादको नयाँ झण्डा फहराउने इच्छा भएको बताएका छन् । अध्यक्ष दाहालले आउने दशक समाजवाद निर्माणको दशक हुने भन्दै नेपाली क्रान्तिको भविश्य उज्ज्वल रहेको बताए । उनले भने, ‘मलाई विश्वास छ नेपालको भविश्य उज्जल छ । चुनौति छन्, टेढोमेढो छ बाटो, घुम्ती र मोडहरु छन् । यद्यपि, क्रन्ति र हिजो देखेको सपनाहरु सफल पार्न सम्भव छ । यसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन ।’
पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले राजधानीमा शनिबार आयोजित ‘पूँजीवादी र समाजवादी अर्थ राजनीतिक विकासक्रम’ पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा भने, ‘समाजवादको झण्डा झुक्न दिइने छैन । पूँजीवादको अगाडि घुँडा टेकिने छैन ।’ उनले समाजवादको कुन बाटो भन्ने विषयमा ‘ग्रेट डिबेट’ मा आफूहरु रहेको समेत बताए ।
उनले भने, ‘हामी समाजवादको नयाँ बाटो खोजेर अगाडि बढ्छौ या पूँजीवादको अगाडि आत्मसमर्पण गर्छौ । हाम्रो अगाडि यक्ष प्रश्न भनेकै यहि नै छ ।’ प्रचण्डले समाजवादी लडाई लडेरै मर्ने इच्छा व्यक्त गर्दै भने, ‘दलाल पूँजी र नोकरशाही पूँजीको लागि आत्मसमर्पण गर्छौ या समाजवादी बाटोमा जान्छौ? लडाई जारी छ ।
यो लडाईमा तपाई कुन कित्तामा उभिनु हुन्छ? म चाहिँ समाजवादी कित्तामा नै उभिएर, समाजवादी लडाई लडेरै मर्ने छु ।’ उनले समाजवाद या पूँजीवाद भन्ने बहसमा नेतादेखि कार्यकर्तासम्म एउटा ऐतिहासिक अग्निपरीक्षा र चुनौतिको सामना गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । उनले नेपालमा समाजवादी मोडल कस्तो हुने भन्ने विषयमा विश्वमा भएका क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका तमाम् घटनाहरुको संश्लेषणसहित ठूलो बहस र संघर्षको बीचबाट गुज्रन जरुरी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘त्यसको निम्ति नयाँ प्रयोगको बीचबाट गुज्रन जरुरी छ । संसारको लागि समाजवादको अवको मोडल यो भनेर दिनसक्ने ठाउँमा हामी छौ । हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन । हामीले आफ्नो प्रयास छाड्नु हुँदैन ।’ उनले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई फेरि पनि लोकप्रिय बनाउने, कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सहि दिशातर्फ अगाडि बढाउने, राष्ट्रको एकता र स्वाधिनता सुदृढ बनाउनको लागि कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकता जरुरी छ भन्ने सचेत सोंचका साथ पार्टी एकता गरिएको समेत बताए ।
उनले क्रान्तिकारी कार्यकर्ता वा नेताको चाहनाले मात्रै क्रान्ति पूरा नहुने आफ्नै अनुभव समेत बताए । उनले भने, ‘चीनमा माओत्सेतुङले १९४९ मा सफल क्रान्ति गरेजस्तै जनमुक्ति सेना लिएर जनताको विशाल फौज लिएर काठमाडौँ आउन चाहन्थे म । म जति चाहने नेपालमा अहिलेको यो कालखण्डमा अर्को कोही पात्र छैन । म त्यसरी नै चाहन्थे ।’
उनले थपे, ‘किन कि १० वर्षको जनयुद्ध मार्फत् गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समानुपातिकता, समावेशीतासहित जनगणतन्त्रको स्पष्ट उद्देश्यका साथ लडाईको मोर्चामा अगाडि बढेको पार्टी र त्यसको नेताको हैसियतले सम्पूर्ण रुपले क्रान्ति सफल पार्ने चाहना अरुमा के हुन सक्छ र ?’ उनले भने, ‘शान्ति प्रक्रियामा नआएर युद्धमै रहेको भए के हुन्थ्यो अहिले ? मैले ठीक गरे कि बेठिक गरे ? के हुन्थ्यो देश अहिले ? गणतन्त्र, संघीय, समावेशी र समानुपातिक भइहाल्थ्यो ? त्यो होइन, झन ठूलो निरंकुशता आउने खतरा थियो ।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रचण्ड